Shiinaha Collagen ee warshadda qurxinta iyo alaab-qeybiyeyaasha | Gelken
Waxyaabaha la isku qurxiyo ee loo yaqaan 'Collagen' waxay dib u buuxisaa kolajka maqaarka, qaab dhismeedka yar ee molecule-ka ahna waa u fududahay inuu maqaarku nuugo si loo gaaro saameynta quruxda.
Hydrolyzed collagen loogu talagalay qurxinta waxaa hydrolyzed ka collagen L. Maaddooyin badan ayaa lagama maarmaan u ah maqaarka oo si sahal ah ayuu u nuugi karaa maqaarku si uu u nafaqo maqaarka una kordhiyo dabacsanaanta maqaarka. Maaddaama ay tahay mid dabiici ah oo lagu daro nafaqada, waxaa loo adeegsaday shaambo, saabuun iyo alaabooyin kale. Dhibaatooyinka maqaarka ee haweenka la wareysto waxay ka taxaddaraan waa maqaarka maqaarka, midabka maqaarka madow, maqaarka qalalan iyo fuuqbaxay iyo laalaabka / sagging, taas oo muujineysa heerka kala-goynta dareenka. Waa la arki karaa in la caddeeyo, fuuq iyo anti-gaboobaya yihiin dhibaatooyinka maqaarka in haweenka inta badan u baahan tahay si ay u xalliyaan ah.
Sahaminta, nafaqooyinka ugu baahida badan ee maqaarku waxay ahaayeen kolajka, fiitamiinnada, soosaarka dhirta, dufanka iyo macdanta, siday u kala horreeyaan.
Gaar ahaan markii wax laga waydiiyey waxyaabaha la xiriira laxaadka maqaarka iyo qoyaanka, dadka intiisa badan ee la wareystay waxay aaminsan yihiin in kolajka uu leeyahay inta ugu badan ee la qabsiga maqaarka, oo ay ku xigto qoyaan, hyaluronic acid, elastin, lipids iyo fitamiino iyo macdano.
Waa la arki karaa in ka mid ah qaybo badan oo la xiriira dhibaatooyinka maqaarka, macaamiisha haweenka ah ayaa weli aad loogu aqoonsan yahay kolajka, garashada ay leedahay hyaluronic acid sidoo kale way sii qoto dheer tahay.Helitaanka biolav of collagen peptide waa mid aad u wanaagsan.
Waxyaabaha la isku qurxiyo ee loo yaqaan 'Collagen' waxaa la nuugi karaa ku dhowaad 100% jidhka bini'aadamka, iyadoo 10% ka mid ahi ay gebi ahaanba nuugaan ku filan si toos ah u kicin kara dheef-shiid kiimikaadka unugyada.
Bioavailability-ka sare iyo hoose ee kolajka peptides-ka waxaa ugu wacan halabuurka amino acid ee u gaarka ah: glycine iyo proline, kuwaasoo ka kooban 50% wadarta guud ee amino acid .Gelken wuxuu bixin karaa kolajiin aad u fiican oo la isku qurxiyo.
Xiga: Kulliyadaha Baarka Nafaqada